Zawtika International Co,.Ltd - ပေး၍မကုန်လှူ၍မခန်း ဇောတိကသင်္ကန်း
About Us (ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်း)
Contact Us (ဆက်သွယ်ရန်)
COMPANY PROFILE | CORPORATE TIME-LINE | VISIONS & MISSION | NATURE OF BUSINESS | STRATEGIES & VALUES | GOVERNANCE:BOARD OF DIRECTORS | LEADERSHIP TEAMS (ORGANIZATION STRUCTURE) | BUSINESS OPPORTUNITIES | RELATED INFORMATION ABOUT SAFFRON ROBES FOR BUDDHIST MONKS | WAY OF MAKING ROBES FOR BUDDHIST MONKS | RELATED INFORMATION ABOUT SAFFRON ROBES FOR BUDDHIST MONKS | SPECIAL PRODUCT OF ZAWTIKA GROUP (Padonma Lotus Robe) | COMPLIMENTARY SERVICES
Ways Of Making Robes For Buddhist Monks
Manufaturing robes has to follow the correct way according to the principles of Buddha's teachings.
The practice of making robes has4significant objectives :
The wearer of the robe does not get to enjoy the soft smoothness of the robe and can only feel the roughness. This removes attachment.
There should be lack of attachment to wearing the robe as it has been dyed with the bark of trees.
Saffron robes for the monks must have many small compartments in order that they cannot be used for lay-purposes
These saffron robes are regarded as the banner of ‘the arahats’ who have arrived at the final destination in Buddhism, the eternal escape from the cycle of rebirth.
So, it is important to follow the correct way of making robes for the monks. The robes are dyed with six substances obtained from the trees, namely dyes from roots, stems, bark, leaves, flowers and fruits.
The Buddha also allowed sis kinds of robe-materials:linen, cotton, silk, wood, coarse hempen cloth and canvas. The Lord Buddha allowed his noble disciples to make robes like the field laid out in strips, in lines, in embankments and in squares. To sewarobe, monks could makeacross-seam,ashort cross-seam,acircular seam,ashort circular seam,acentral piece, side pieces,aneck-piece,aknee-piece and an elbow-piece. These pieces were roughly darned together to be suitable for recluses and not to be coveted by opponents.
The Buddha also allowed monks three robes:a double outer cloak,asingle upper robe andasingle inner robe to protect themselves from the cold.
So, raw matarials are important and carefully selected before preparing for making robes and cutting the materials.
When we makeanew robe to be donated for the monks,alarge piece of material is cut into small pieces. Then, they are joined and sewn in the shape ofapaddy field, compartment by compartment as if it is made up of pieces of rag-robes, according to the Vinaya, monastic disciplines. In cutting the materials, there are two ways: cutting to get the accurate number of small pieces forarobe, and cutting to get the main parts forarobe.
In accordance with Vinaya Pitaka, the Canon of Monastic Disciplines, the compartments inasaffron robe resemble paddy fields of the farmers in the country of Magada, which existed at the time of Buddha being in this world and setting these principles. So,asaffron robe looks likeapatchwork of squares of small pieces of clothes. Our Zawtika group manufactures these kinds of monastic robes exactly in accordance with the Vinaya and we offer the robes with the right standards and true quality control in the market.
အမှတ်(၃၇)၊ ရေတာရှည်လမ်းဟောင်း၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း ၀၁-၃၈၀၅၈၁၊ ၃၈၀၅၇၈၊ ၈၆၀၃၁၂၈၊ ၈၆၀၃၁၂၉
အမှတ်(၃၅)၊ အခန်း(၃)၊ ရေတာရှည်လမ်းဟောင်း၊ ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုခ်အနီး၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း ၀၁-၃၈၀၅၈၁
အမှတ်(၉၇) အေ၊ ဘုန်းကြီးလမ်းအလယ်၊ သရက်တော ကျောင်း တိုက်အနီး၊ လမ်းမတော်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း ၀၁-၂၁၂၁၅၉
အမှတ်(၆၁၊၆၂)၊ အထက်ကြည်မြင်တိုင်လမ်းမကြီး၊ ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း ၀၁-၅၃၆၅၈၉
အမှတ်(၃၅)၊ အခန်း(၅)၊ ရေတာရှည်လမ်းဟောင်း၊ ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုခ် အနီး၊ ဗဟန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း ၀၁-၃၈၀၅၇၈
တိုက်(၆)၊ ၁၅လမ်း၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့် ၁၅လမ်းထောင့်၊ ညောင် ပင်လေးဈေးအနီး၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း ၀၁-၂၂၄၉၂၈
အမှတ်(၃၄၅-ဘီ)၊ ကျိုက္ကဆံလမ်း၊ တာမွေလမ်းဆုံ၊ ရွှေဗဟိုရုပ်ရှင်ရုံရှေ့၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း ၀၁-၇၀၇၂၅၉
အမှတ် (၁၁၀)၊ အခန်း (၂)၊ မြေညီထပ်၊ ပြည်လမ်း၊ ၈မိုင်လမ်းဆုံ၊ ရိုးမဘဏ် အနီး၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း ၀၁- ၆၅၁၉၆၄
တိုက်(၅)၊ အခန်း(၅)၊ အထက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း ၀၁-၂၀၁၈၇၀
အမှတ်(၃၅)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ စံပြဈေးအနီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း ၀၁-၅၇၉၅၄၄
အမှတ်(၈၅)၊ မြန်မာဘစ်ရှော့ဈေးဝယ်စင်တာ၊ ရေတာရှည် လမ်းဟောင်း၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း ၀၁-၅၅၂၉၂၅၊ ၅၅၂၈၀၂၊ ၃၇၅၄၇၀
အမှတ်(၈၄၇)၊ ၈၁လမ်း၊ ၄၅နှင့် ၄၆လမ်းကြား၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
Copyright © 2012 ZAWTIKA International Co.,Ltd. All rights reserved.